Gọọmentị Russia kwadoro iwu iwu gbasara "ịmị mkpụrụ" - magazin "Potato System"
Gọọmentị nke Russian Federation kwadoro iwu iwu "Na-amị mkpụrụ"
в Ala, News
Dị ka Mikhail Mishustin si kwuo, nke a bụ akwụkwọ dị mkpa maka mpaghara ọrụ ugbo mba. "Ezigbo ihe ubi na, n'ezie, uru nke ọtụtụ ugbo na-adabere na ịgha mkpụrụ," Prime Minister kwuru.
Versiondị iwu ọhụrụ ahụ na-akọwapụta echiche ndị bụ isi ma na-achịkwa usoro ndị isi metụtara mmepụta, ire na nchekwa nke mkpụrụ, a na-ezube ịtọlite ​​iwu nke ga-ekpebi ihe achọrọ maka ogo mkpụrụ. Ihe odide a na-enye maka ịmepụta usoro ihe ọmụma nke steeti gọọmenti etiti n'ọhịa nke ịmị mkpụrụ nke osisi ugbo. Site na akụ dijitalụ a, ndị na-akọ ugbo ga-enwe ike ịnweta ozi banyere nnweta mkpụrụ mkpụrụ osisi dị elu nwere njirimara ndị akọwapụtara na ahịa, yana ịchọpụta ma mkpụrụ ndị a ha kwesịrị ekwesị maka mmeputakwa n'ọnọdụ ụfọdụ. Akọwapụtakwala usoro maka ụdị ọhụrụ dị na Steeti Register of Rụrụ Arụzuru, nke a ga-anwale ụdị ọ bụla na-eburu n'uche nkọwapụta mpaghara.
Gọọmentị kwadoro ụgwọ ahụ ma n'oge na-adịghị anya a ga-enyefe ya n'aka ndị obodo Duma maka ịtụle.
Tags: mkpụrụ mkpụrụOzi nke Ọrụ Ugbo nke Russian Federation
Storagelọ ọrụ nchekwa 2025 a ga-ewu na Ukraine site na 35
Kama ndị si mba ọzọ kwabata, Mịnịstrị na-ahụ maka ọrụ ugbo ga-adọta ụmụ akwụkwọ maka ọrụ ubi
O nwere ike a gaghị enwe ndị ọrụ zuru ezu iji rụọ ọrụ ugbo na oge ọhụrụ
Ministri nke Ugbo nke Russia na-atụ aro ịgbanwe oge mmemme sayensị maka mmepe nke ọrụ ugbo
Gọọmentị ga-agbasa nkwado enyemaka maka agro-ụlọ ọrụ mmepụta ihe